မြင်းခြံမြို့နယ် ဖက်ပင်အိုင်ကျေးရွာမှ အမြွှာညီအစ်မသုံးယောက် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို လေးဘာ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂- မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ဖက်ပင်အိုင်ကျေးရွာနေ အမြွှာညီ အစ်မသုံးယောက် စလုံးတက္ကသိုလ် ၀င်စာမေးပွဲတွင် လေးဘာသာဂုဏ် ထူးကိုယ်စီဖြင့် ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း ထိုသို့အောင် မြင်ခဲ့သဖြင့် မိသားစုလည်း ပျော်၊ တစ်ရွာလုံးလည်းပျော်ခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။
အဆိုပါအမြွှာညီအစ်မများ သည် သုံးမိနစ်ခြားစီ မွေးဖွားခဲ့သော အမြွှာများဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်စာ မေးပွဲကို မြင်းခြံမြို့နယ်ရှိ အထက (၄)ကျောင်းတွင် ၀င်ရောက်ဖြေဆို ပြီး လေးဘာသာဂုဏ်ထူးများဖြင့် အောင်မြင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“အမြွှာသမီးလေးတွေအားလုံး ဂုဏ်ထူးတွေဆင်တူပါတော့ ပိုပျော် မိတယ်။ လိုင်းတစ်လိုင်းထဲဖြစ်တော့ မယ်ဆိုတော့ ပျော်ပါတယ်။ ကျွန်မ ကတော့သမီးတွေ ၀ါသနာပါတာပဲ လုပ်စေချင်ပါတယ်။ အမြွှာလေး တွေအထက်မှာ သူ့တို့အစ်ကိုရယ်၊ သားသမီးလေးဦးရှိပါတယ်။ အိမ်ရဲ့ စီးပွားရေးကတော့ သူ့အဖေကစိုက် ပျိုးရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ တိုင်းတာဝန် ခံပါ။ သုံးယောက်စလုံးဆေးလိုင်းမီ တယ်ဆိုရင်တော့ အကူအညီလိုအပ် လိမ့်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ် ” ဟု အမြွှာညီအစ်မသုံးယောက်၏ မိခင် ဒေါ်ခင်မျိုးမင်းကပြောသည်။
အမြွှာညီအစ်မသုံးဦးရရှိခဲ့ သော ဂုဏ်ထူးများမှာမသန့်ထား ထားဇော်(သင်္ချာ၊ဓာတု၊ ရူပ၊ဇီဝ)၊ မသန့်ထက်ထက်ဇော်( မြန်မာစာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီဝ)နှင့် မသန့်ထူးထူးဇော် (သင်္ချာ၊ဓာတု၊ရူပ၊ဇီဝ)တို့ဖြစ်သည်။
“ပျော်ပါတယ်။ သုံးယောက် စလုံးဆိုတော့ပိုပြီးတော့ ပျော်ပါ တယ်။ ညီမတို့ကသုံးမိနစ်ခြားမွေး လာကြတဲ့ အမြွှာညီအစ်မတွေပါ။ ၀ါသနာပါတာကတော့ အမှတ်မီရင် ဆေးလိုင်းတော့ရချင်ပါတယ် ” ဟု အမြွှာညီအစ်မများတွင်အကြီးဆုံး ဖြစ်သူမသန့်ထားထားဇော်က ပြော သည်။
အစ်ကိုဖြစ်သူကို ဥာဏ်လင်း ထက်ကလည်း “အမြွှာညီမလေး တွေနဲ့ကျွန်တော်က မောင်နှမအ ရင်းပါ။ သူတို့အတွက်ပျော်ပါတယ်။ သူတို့စာကျက်ကြပါတယ်။ ကျူရှင် သွားလိုက်၊ ပြန်လာစာကျက်တယ်။ ထမင်းစားတယ်။ ကျူရှင်ပြန်သွား တယ်။ ပြန်လာရင်စာကြည့်တယ် အဲဒီလိုမျိုးတွေစာကြည့်ကြပါတယ် ” ဟု ပြောသည်။
အထက်တန်းပြ ရာထူး နေရာတစ်သောင်းကျော်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ရာထူးတိုးများခေါ်ယူ
မိုရာတာအား ခေါ်ယူနိုင်ရေး ဆီဗီလာအသင်း ဆွေးနွေးလျက်ရှိ
အမရပူရ စကျင်ဝရပ်မှ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသူများအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့် လက်မ??